Egwuregwu KDM + KSplash maka Slackware | Site na Linux
Egwuregwu KDM + KSplash maka Slackware
Enwere m olileanya ime ndị ọrụ nke Slackware+KDE na ha guru anyi 🙂
Nyochaa KDE-Lee Achọpụtara m egwuregwu nke KDM+KSplash na ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ochie, ọdịdị ya adịghị njọ 😀
Dịka ị pụrụ ịhụ ... ọ bụ site na mgbe KDE 4.2, mana ha adịghị njọ ma ọlị ... ana m ahapụ njikọ njikọ 😀
Budata isiokwu maka KDM
Echeghị m na ọ dị mkpa ịkọwa otu esi etinye ha, nri? … Ọ bụrụ na i jiri Slackware, nke a ga-abụ egwuregwu ụmụaka maka gị LOL !!! 😉
Ka o sina dị, enwere m olileanya na mmadụ hụrụ nke a, ma eleghị anya ọ bụrụ na ịchọrọ ma ghara iji distro a ... cheta na ị nwere ike gbanwee nke a 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Egwuregwu KDM + KSplash maka Slackware
Echere m na ọ ga-adị mfe ịgbanwe ihe oyiyi iji gụọ kde 4.8 xD ...
N'ozuzu, ọ dị mfe: a na-emegheghe faịlụ isiokwu, png, jpeg, wdg, a gbanwere ha ka ha kwekọọ na onye na-azụ ha. Mgbe ahụ ihe niile na-repackaged na arụnyere kwesịrị. Ọ bụ usoro m na-eji emetụ ụfọdụ isiokwu aka ma ọ bụ mee ka m tụọ m, ọ na-ewekwa obere oge.
Nye na-enye mgbanwe ọ bụla? 🙂
Achọrọ m iweta Slim isiokwu na KDM ... nke masịrị m, mana emere ya Slim hehe.
Echere m na ịkpụzi ya ga-abụ egwuregwu ụmụaka, ị ga-adị ezigbo mma ịnwe slackware yana ọ na-adịgide n'enweghị petarte ...
Mana echere m na anwansi dị na ịdabere na tarball ha
O sighi ike ịme ya ka ọ dịgide n’agbajighị ya. Ihe nzuzo bụ ịkwado ihe ị ga-agbanwe ma ọ bụ nwee ahụmịhe igwe eji eme ihe tupu ịmee mgbanwe na sistemụ gị.
Banyere dependencies ... uff na iji aka dozie ha bụ ọrụ mana enwere peeji ndị na-enyere aka na ọrụ na-abụghị nke gọọmentị ma ọ bụrụ na ha edozi ha.
Banyere KSplash… ọ dị mma 🙂
ziri ezi na ị bụ nri mebere igwe bụ n'ihi na.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya, enwere m ike ikwu n'ejighị ụjọ ịbụ onye kacha sie ike n'ụwa gnu / linux.
Gentoo siri ike mana opekata mpe o nwere ihe eji eme ihe, slackware amaara m na o nwekwara ike iji ihe yiri nke apt, mana echeghị m na ọ bụ 100% slack, slack ka m jiri ya na tarballs, rie dọkụmentị banyere dependencies na hazie ihe niile site n'aka, ọbụna ihe mfe…
A distro maka nerd nwere oge karịa karịa cain
Ebumnuche ọ bụla banyere Gentoo. Ọ bụ ezie na enwere ngwaọrụ ndị yiri nke apt, enwere oru akpọrọ SlackBuilds.org bụ ederede ederede maka mmemme dị iche iche, ọ naghị edozi ndị ahụ dabere kama ọ na-agwa gị na nke a. Emegola m edemede ụfọdụ maka ọrụ ahụ ma ugbu a, ana m eme ọzọ maka emesene. Nke ahụ bụ ihe m na-eme xDDDDD
I chefuru Linux site na hecha hehehe
ma Lunar na Minix ????
Nke ha bu ijide distro tozuru oke ka o ghara ikpofu ahihia ma inwee akwukwo, bia.
Onye bu pimp nke n’aghari na Linux site na ihe na erughi otu ubochi o gwuchara, obu ezie na o mee na enweghi m oge ma obu ihe omuma, pacman manager ga aga saka.
Maka m ọ bụ njikwa kacha mma na-enweghị elelị ndị ọzọ, kachasị ọsọ na enweghị nsogbu (na anaghị m elele nke ọ bụla n'ime ha !!!) Lol !!!
Ahụrụ m Slackware dị ka onye kwụsiri ike, ọ bụ ezie na ịgụ ihe odide sitere na mgbe Stallman enweghị afụ ọnụ, ọ dị m arọ nke ukwuu, ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-eme ya nwere mmasị m!
Gaara ịhụ mgbe na slack nkuzi na di ntakiri ọkachamara mode 🙂
Kotonaru isiokwu maka KDE
Esi gbanwee mkpebi ihuenyo site na iji xrandr